Angu-45 amakhansela asebulewe kusukela ngo-2009 - Mbalula | News24
Angu-45 amakhansela asebulewe kusukela ngo-2009 - Mbalula
Cape Town – Sekubulawe amakhansela angu-45 kusukela ngo-2009, ngokwempendulo kaNgqongqoshe wamaPhoyisa ayikhiphe ngesikhathi ebuzwa imibuzo ePhalamende ngoLwesine.
Ukubulala okuhlobene nezombusazwe sekudonse amehlo abezindaba kulezi zinyanga ezedlule kulandela ukubulawa kwezikhulu zikahulumeni eziningi ngemuva kokhetho lwasemakhaya lwango-2016, okubalwa nalowo owayenguNobhala Jikelele we-ANC Youth League eyahlakazwa, uSindiso Magaqa, owashona ngoSepthemba.
ILungu le-Economic Freedom Fighters (EFF) ePhalamende uSibonakaliso Mhlongo ubuze uNgqongqoshe uFikile Mbalula, ukuthi mangakhi amakhansela asebulewe isifundazwe ngasinye kusukela ngo-2009, okuyisikhathi lapho okwaqala khona ukuphatha uhulumeni kaMengameli Jacob Zuma.
OLUNYE UDABA: Kuthiwa kade ayekhala ngokulandelwa uSindiso Magaqa
UMbalula uphendule wathi, kule minyaka engu-8, mahlanu amakhanela abulawe e-Eastern Cape, lilodwa eFree State, mane eGauteng, ayisikhombisa eMpumalanga, mathathu eNorth West, linye eWestern Cape, kanti KwaZulu-Natal angu-24.
Ukubulawa kwala makhansela kwenzeke cishe komasipala abangu-18 KwaZulu-Natal.
Mayelana nalezi zehlakalo sekuboshwe abantu abangu-62. Ngokwezifundazwe, kwaboshwa abathathu e-Eastern Cape, abathathu eFree State, abayisithupha eGauteng, abangu-15 eMpumalanga, abane eNorth West, kanye nabangu-31 KwaZulu-Natal.
UMbalula akazange enabe ukuthi uphenyo lukusiphi isigaba kubona bonke laba abangu-62 ababoshwa.